Otu esi eme ka nhazi zuru oke
Mma nke nwanyị Egwuregwu Ụbọchị ehihie
Nwaanyị ọ bụla chọrọ ka ọ mara mma na iji mezuo nke a, onye nke ọ bụla n'ime anyị na-enyere aka itinye aka. Ndozi na-eme ka a mata ọdịdị ihu, anyị onwe anyị nwekwara ikike ịgbanwe àgwà nke anya, imi na egbugbere ọnụ. Nzuzu zuru oke kwesiri igosi ya, site n'enyemaka ya, nwanyi obula kwesiri izobe ezighi ezi ma mesie ike ya. Ma iji mezuo ihe zuru okè, ị ghaghị ịgbaso iwu ụfọdụ mgbe ị na-etinye ya n'ọrụ.
Mmechi akpụkpọ anụ masking
Otu pasent nke ụmụ nwaanyị si na otu narị nwere akpụkpọ anụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ihe otutu, mbufụt, wrinkles, akọrọ, ma ọ bụ, na Kama nke ahụ, ọdịdị abụba dị n'ahụ. Na bruises n'okpuru anya? Kedu nsogbu ha na-eweta na ọkara mara mma nke mmadụ? Kedu ihe m kwesịrị ime? Ịmụta iji kpuchie adịghị ike nke akpụkpọ ahụ. Na kosmetichke gị ga-abụ onye na-elekọta ndị na-ekpuchi ọnya-ọdụ. Na concealer, anyị na-ezoo ezughị okè anụ ahụ, ghara ichefu aspen n'okpuru anya. Ma, otu ihe ma - "ụkwụ ụkwụ" na anya anyị na-ahapụ n'udo. Ichebe akụkụ a nke ihu, n'ụzọ megidere, ga-emesi ha ike ọbụna karị.
Kwenye ụda ahụ
Ọ dị mkpa ịmegharị ụda nke ihu? Mba, ọ bụrụ na ị dị afọ iri na asatọ, ọ bụrụ na ị ga - ahụ maka ndị inyom nke Balzac, ụda kwesịrị iji nlezianya mee ihe. Tinye ya na sponge pụrụ iche, nke mere na isi dị na akpụkpọ ahụ dịka o kwere mee. Site na ụda ụda, ọ ga-ahụ ihe niile dị ntakịrị ma ọ bụghị nke ọma. Tupu itinye ụda na ihu, na mbụ anyị tinye ya na ogwe aka, okpomọkụ nke ahụ ga-eme ka ọ kpoo ọkụ ma dinara na mbara ihu. Igwe ụda ahụ, echefu egbugbere ọnụ na nche, nke mere na ọ dịghị ntụgharị ngwa ngwa na ntutu nke ogige.
Ka anyi kwuo okwu banyere ichapu na uzuzu
Ọ dị m mkpa itinye njo? N'ezie, ọ dị mkpa. Ọ bụghị nanị na ịmị ọkụ na-eme ka ihu ahụ dị ọhụrụ, ha na-enye ya ọdịdị dị mma ma hụ ya anya. A naghị atụ aro ka ị tinye ụda na cheekbones, n'ihi na nke a nwere ike ịka ntakịrị. Ọ ka mma ịmalite ịme ihe na njigide nke cheeks. Ndozi ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọkpụkpụ ahụ a na-ejikarị edozi ga-adị nhata na akara nkuanya. Echefukwala ịgbakwunye ntakịrị rouge ka ọ bụrụ akụkụ ihu na ihu.
Powder bụ akụkụ dị oké mkpa nke akpa akpa anyị. Ma nwaanyị nke tolitere, ọ ga-eji ntụ. Mgbe ọ dị afọ, akpụkpọ ahụ na-aghọ ọkpụkpụ, na ntụ ahụ kpochapụrụ ya ọbụna karị. Na kistitonkim Layer, tinye ntụ ntụ na mpaghara T, nke gụnyere agba, imi na ọkpọiso.
Mee nku anya
N'ụzọ doro anya, anyị na-elebara nku anya anya pụrụ iche. Nwanyị ahụ na-akawanye nká, nku anya ya na-adịkarị ụfụ. Enweghi nku anya na-enweghị ike iji pensụl, akara ahụ nwere ike ịba oke abụba ma ọ bụghị ezi. Na nke a, jiri onyunyo ndị kacha mma maka agba agba nke nku anya. Mgbe o tinyechara onyinyo, na-ehichapụ ọnụ, na-atụ aka na-agbapụ elu, ma dozie nsonaazụ ya na gel pụrụ iche. Na nke a, nku anya ga-egbuke egbuke, nwee ọdịdị mara mma na nke ọma.
Lekwasị anya na anya
Họrọ onyinyo nke ụda nkwụnye ma tinye ha na nkuchianya elu. A na-eji onyinyo dị ntakịrị nke na-acha na-achagharị agbachapụ na narị afọ nke mbụ. Black pencil na liner na-eriri eriri eri tinyere na nsọtụ nke uto nke anya. Iji bulie nku anya na anya n'ihu, anyị na-etinye onyinyo onyinyo n'okpuru nku anya. Ha enweghị ihe ọ bụla kwesịrị ịdị na-agba mbọ, gbalịa ka ha nwee ike ịchọta ihe ndị dị mma. Mkpịsị aka ikpeazụ bụ mascara, mesie ha ike ma ọ bụ ntụgharị, gbakwunye. Ọ bụrụ na e nwere akpa n'okpuru anya na ihu, obere nku anya ekwesịghị ịdị na-ese, ha na-eme ka anya dị arọ.
Dee egbugbere ọnụ ya
Nwanyị nwanyị ahụ na-etolite, nke ka njọ nke njedebe nke egbugbere ọnụ ya. Ya mere, na-eji pensụl mee ihe mgbe nile, na-ekwusi ike na egbugbere ọnụ. Mgbe ị na-ahọrọ lipstick maka ụbọchị ọ bụla, họrọ ahịrị tonel pastel gị, àgwà ndị na-egbuke egbuke ma gbaa ọchịchịrị ga-ahụ nke ọma n'ụbọchị. Onye ikpe a agaghị emeri, ma ọ ga-ata ahụhụ. Tinye egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ lipstick, jiri nwayọọ shading ya. N'ikpeazụ, ịnwere ike ịgbakwunye ntakịrị ìhè dị n'etiti egbugbere ọnụ ya, yabụ anyị na-agbakwunye olu.
Lee anya na enyo ahụ, ihe zuru okè ga-eme ka onye ahụ nwee ịma mma magburu onwe ya. Na njedebe nke ekpri ụtọ kachasị amasị gị ma ị nwere obi obi ike.
Kedu otu esi eme ncha kwa ụbọchị?
Kedu otu esi eme ncha
Iwu nchịkọta kwa ụbọchị
Dezie na-eme ihe ọ bụla kwa ụbọchị
Mara mma ụbọchị etemeete maka brunettes
Iwu maka itinye nlekota nke ehihie
Kedu otu esi edozi ọrụ nke eriri afọ?
Ụdị omenala a na-eji eme ihe maka ọdịdị ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ
Otu esi enweta ego na otu esi esi muta ego
Ofe na beef na tomato
Onyinye site na zodiac ihe ịrịba ama: Ihe ịrịba ama nke ụwa
Ime ime, echiche ọjọọ na-emetụta nwa ahụ
Kedu ka mma si zute onye òtù ọlụlụ?
Pizza na mozzarella na tomato ihendori
Mmetụta nke nrụgide na ahụ mmadụ
N'aka aka ekpe: akụkụ ahụike nke aka ekpe
Ememme Nkiri Venetia: gịnị ka anyị maara banyere asọmpi egwu egwu kachasị elu?
Agbamakwụkwọ na Ime: Obi Ụtọ Abụọ
Omelette na tomato
Ezi ntụziaka maka salad "Sunflower"
Epiphany nke Onyenwe anyị 2018 (Epiphany): ihe ịrịba ama, omenala na ịkọ ọdịmma na mgbede Epiphany
Enyemaka psychology na onwe-hypnosis na-efu ibu
Onye na-aṅụ sịga. Ntụziaka nke ọkụkọ a ṅara n'ọkụ